နည်းပညာပံ့ပိုးမှု - Wuhan Golden Laser Co., Ltd.
Plate နှင့် Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
သတ္တု & Non-သတ္တုလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
Single Table Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
Tube နှင့် Plate လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
Linear Motor Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ပိုက်နှင့် Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း နမူနာများ
သတ္တုစာရွက် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း နမူနာများ
3D စက်ရုပ်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း နမူနာများ
လေဆာစက် Catalog ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ပြန် / ဆက်
GOLDEN laser ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု
စေ့စပ်ခြင်းနှင့်စုံလင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာ, ငါတို့သည် Pre-ရောင်းချမှုစုံလင်သောရှိတယ်ရောင်းအားနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုစနစ်များ, ငါတို့သည်လည်းအောက်ပါနယ်ပယ်များတွင်ပြည့်စုံသောစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်သွားရန်မဟုတ်သာစစ်ဆေးနိုင်သည်
1. ဝယ်ယူသူတိုင်းတွင် ရွှေလေဆာ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု သတင်းအချက်အလက် စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့်စနစ်တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုင် ပါရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သေချာစေနိုင်သည်။
2. ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုစီတိုင်း (ထိန်းသိမ်းမှု၊ ပြန်လည်လည်ပတ်မှု၊ ဝယ်ယူသူစိတ်ကျေနပ်မှုစစ်တမ်းစသည်ဖြင့်) ကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး အချိန်မရွေး မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ဖောက်သည်စက်ပစ္စည်းများ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတ်တမ်းများကို အခါအားလျော်စွာ ရေတွက်ပြီး သုံးစွဲသူများအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အကြံပြုချက်များ ပြုလုပ်ပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ တင်းကျပ်တဲ့ နည်းပညာအဖွဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု
၁။ ရွှေလေဆာရောင်ခြည်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတိုင်းတွင်ကောလိပ်ဒီဂရီသို့မဟုတ်အထက်ရှိပြီး၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတိုင်းသည်ရေရှည်လုပ်ငန်းခွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုခံယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာအကဲဖြတ်မှုစနစ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။
2. ဖောက်သည်များ၏ အကျိုးစီးပွားသည် အမြဲတမ်း ပထမဖြစ်ပြီး ဖောက်သည်တိုင်းကို ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့် လေးစားခြင်းမှာ မတုန်မလှုပ်သော တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဆိုက်တွင်းဝန်ဆောင်မှုသို့ တိုင်ကြားမှုများကို လက်ခံခြင်းမှသည် ဝယ်ယူသူထံမှ တောင်းဆိုမှုတိုင်းကို ရွှေလေဆာဖြင့် အပြည့်အဝပေးချေမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံပါသည်။
3. ရွှေလေဆာဝန်ဆောင်မှုစင်တာသည် အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းများအား နည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာများ မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုများ တိုးတက်စေရန်အတွက် အခါအားလျော်စွာ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
4. ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၏ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက်၊ သုံးစွဲသူများသည် စဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်အလို့ငှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြိုင်ဆိုင်မှုယန္တရားနှင့် အအံဆုံးနှင့် အရည်အချင်းရှိသူများ၏ အသက်ရှင်သန်မှုအတွက် စွမ်းရည်အရံယန္တရားတစ်ခုကိုလည်း ထူထောင်ထားပါသည်။
တတိယအချက် - စံ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူစီမံခန့်ခွဲမှု
၁။ ကုမ္ပဏီသည် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစံနှုန်းကိုက်ညီစေရန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းရှိစေရန်ကုမ္ပဏီသည်စုစည်းထားသောကျင့် ၀ တ်စည်းမျဉ်းနှင့်အကဲဖြတ်သတ်မှတ်ချက်များကိုချမှတ်ခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွဲပြားမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးကိုလျှော့ချပြီးရှောင်ကြဉ်သည်။
2. ကုမ္ပဏီသည် ဘက်စုံ ဝန်ဆောင်မှု ကြီးကြပ်ရေးစနစ်ကို ထူထောင်ထားသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျင့်ဝတ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုစံနှုန်းများကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူများအား ပြင်းထန်သော ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။
စတုတ္ထအချက် - ချောချောမွေ့မွေ့သတင်းအချက်အလက်ချန်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှု
၁။ ဖောက်သည်များသည်တယ်လီဖုန်း၊ ဖက်စ်၊ စာ၊ အီးမေးလ်နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မက်ဆေ့ခ်ျစသည့်လိုင်းအမျိုးမျိုးမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
2. ရွှေလေဆာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသည် အထက်ပါချန်နယ်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဂရုပြုပါသည်။ ဖောက်သည်၏ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု၊ တိုင်ကြားမှုများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များကို အတိုဆုံးအချိန်အတွင်း ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုကို အမြင့်ဆုံးရရှိရန် ကြိုးပမ်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု အချက်အလက်များ စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စနစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ထားပြီး ဖောက်သည်များ၏ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ၊ တိုင်ကြားမှုများနှင့် ပြုပြင်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို လက်ခံရန်နှင့် သုံးစွဲသူများကို တစ်နေ့ 24 နာရီကြာ ခြေရာခံရန် 400-969-9920 အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု hotline ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို ခံစားနိုင်သည်-
1. ဝယ်ယူသည့်နေ့မှစ၍ ဘဝတစ်သက်တာအတွက် အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို ခံစားလိုက်ပါ။
2. စက်ရောက်ရှိပြီးနောက်၊ သုံးစွဲသူများအတွက် စက်ပစ္စည်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာလည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် သုံးစွဲသူများအတွက် ပထမအကြိမ် တပ်ဆင်ခြင်း၊ ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေးခြင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသည် ဆိုက်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖောက်သည်က လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး အတည်ပြုပြီးနောက်၊ သင်တန်းပြီးမြောက်နိုင်သည်၊
3. စက်အသစ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးများ 2-3 ရက်ကြာပြီးနောက်၊ Gold Laser Customer Service Center သည် ဝယ်ယူသူအား ပြန်လည်ခေါ်ဆိုပါမည်။ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည်-
က) စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ပြီး တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ စက်ပစ္စည်းများကို သင်ကျေနပ်ပါသလား။
b) ဖောက်သည်သည် လည်ပတ်မှုနည်းလမ်းကို ကျွမ်းကျင်ပြီး အမှီအခိုကင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ မည်သည့်အကူအညီ လိုအပ်သနည်း။
ဂ) သင်တန်းအင်ဂျင်နီယာ၏ အလုပ်သဘောထားကို ကျေနပ်ပါသလား။
ဃ) အရောင်းအပြီးအင်ဂျင်နီယာသည် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ အရောင်းဌာန 400-969-9920 သို့ခေါ်ဆိုပြီးနောက် သုံးစွဲသူအား အကြောင်းကြားပါသလား။
4. ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့်အခြေအနေအရ၊ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ရေးအင်ဂျင်နီယာထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မဖြေရှင်းနိုင်သေးပါက ဖြေရှင်းကူညီရန် သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာသုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနများသို့ "အလုပ်ဆက်သွယ်ပေးစာ" အကြံပြုချက်ကို ပေးပို့ပါမည်။ ပြီးစီးပြီးနောက်၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသည် ဖောက်သည်များထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
5. ဖောက်သည်များ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်ရန်နှင့် Golden လေဆာဝန်ဆောင်မှု၏ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်၊ သုံးစွဲသူတစ်ဦးစီသည် အောက်ပါတို့ကို သုံးကြိမ်ထက်ပို၍ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
က) စက်အသစ်တပ်ဆင်ခြင်းသင်တန်းပြီးဆုံးပြီးနောက် သုံးရက်အကြာတွင်၊
b) စက်အသစ်တပ်ဆင်ခြင်းသင်တန်းပြီးနောက် သုံးလအကြာတွင်၊
ဂ) ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဝယ်ယူသူ တောင်းဆိုချက်။
ဃ) စက်အမျိုးအစားတူအတွက် ပြန်လည်လည်ပတ်မှုများကို နမူနာယူကာ တိုးတက်မှုကို ရှာဖွေခြင်း၊
6. Golden လေဆာဝန်ဆောင်မှုစင်တာဖုန်း 400-969-9920 အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုခေါ်ဆိုမှုတွင် ဝယ်ယူသူ၏မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများ၊ တိုင်ကြားမှုများနှင့် ပြုပြင်မှုလိုအပ်ချက်များကို လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှ ဆိုက်ပြုပြင်မှုများအတွက် အရောင်းအပြီးတွင် အင်ဂျင်နီယာများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ရွှေလေဆာဝန်ဆောင်မှုဆိုင်များ၏ ကီလိုမီတာ 300 အကွာအဝေးအတွင်း ဖောက်သည်များအား ရောင်းချပြီးနောက် အင်ဂျင်နီယာများသည် တိုင်ကြားမှုများလက်ခံရရှိပြီး 24 နာရီအတွင်း ဆိုက်တွင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်ပေးမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။ အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုထွက်ပေါက်မှ ကီလိုမီတာ 300 အကွာတွင်ရှိသော ဖောက်သည်များသည် အရောင်းအပြီးတွင် အင်ဂျင်နီယာများသည် 72 နာရီအတွင်း ဆိုက်ဆိုက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်များကို လက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားဖောက်သည်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် 10 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပြီး 72 နာရီအတွင်း ပြုပြင်ပေးပါသည်။
WUHAN GOLDEN LASER CO ။ , LTD ။
မင်းရဲ့စိတ်ကိုနားထောင်တဲ့တရုတ်ရဲ့မင်းရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်စက်ထုတ်လုပ်သူတွေကမင်းရဲ့စိတ်ကိုနားထောင်ပြီးမင်းရဲ့သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းနဲ့သတ္တုဂဟေဆော်ခြင်းတောင်းဆိုချက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမင်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ မင်းရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုပို့ပါ၊ ငါတို့ကမင်းရဲ့အသေးစိတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုမင်းတတ်နိုင်လိမ့်မယ်။
ပိုက် & Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသတ္တုပြားနှင့် Tube လေဆာ
စက်ရုပ်လက်မောင်းကို 3D လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းထိုဂဟေဆော်ခြင်းစက်
လေဆာ application များ
ရွှေလေဆာအဆောက်အအုံအမှတ် ၃-၃ Shiqiao ပထမလမ်း၊ Houhu လမ်း၊ Jiangnan ခရိုင်၊ Wuhan၊ Hubei၊ တရုတ်
+၈၆ ၀၂၇ ၆၁၇၅ ၀၁ ၀၉
+86 ၁၅၈၀၂၇၃၉၃၀၁ (WhatsApp / Wechat)
မူပိုင်ခွင့်© 2005-2021 Wuhan Golden Laser Co. , Ltd အားလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်